အထူးကဏ္ဍ Archives | Page 25 of 31 | Frontier Myanmar
သတင်းမီဒီယာကောင်စီသစ် သမ္မတရှေ့၌ ကတိသစ္စာကျိန်ဆို
သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်သစ်များကို သမ္မတဦးသိန်းစိန် နှုတ်ဆက်နေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- စိုးသန်းလင်း မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်သစ်များက သမ္မတရှေ့မှောက်၌ ကတိသစ္စာကျိန်ဆိုမှုကို ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက သမ္မတအိမ်တော် သဘင်ဆောင်ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်သစ်များ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ရှေ့၌ ကတိသစ္စာကျိန်ဆိုနေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- စိုးသန်းလင်း သတင်းမီဒီယာကောင်စီသစ်အနေဖြင့် သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ၊.
ထပ်တိုးဘတ်ဂျက် ကျပ် ၂,၄၆၄ ဘီလျံကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အတည်ပြု
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ခွဲဝေသုံးစွဲသည့် ဘဏ္ဍာငွေ ဥပဒေကြမ်းအရ ကျပ် ၂,၄၆၄ ဘီလျံ တောင်းခံထားမှုကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်က အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ၏ နောက်ထပ်ခွင့်ပြုသည့် သုံးငွေများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများအတွက် နောက်ထပ်ခွင့်ပြုသည့် သုံးငွေများ၊.
News Feed, စီးပွားရေးသတင်းတို, Breaking News, အထူးကဏ္ဍ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး စတော့အိတ်ချိန်း ဖွင့်လှစ်
ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်က ဖွင့်လိုက်သည့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းကို တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ – EPA မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး စတော့အိတ်ချိန်းဖြစ်သည့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း Yangon Stock Exchange (YSX) ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ စတော့အိတ်ချိန်းမှ တဆင့် ရှယ်ယာထုတ်ရောင်းရန်.
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ကိုယ်စားလှယ် လစ်လပ်သည့်နေ့မှ သုံးလအတွင်း ကျင်းပနိုင်ရန် ဥပဒေ ပြင်ဆင်မည်
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အခါအားလျော်စွာ ကျင်းပပေးရမည် ဟူသည့် လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသည် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွား အခွင့်အလမ်းများကို ထိခိုက်စေသဖြင့် ထိုဥပဒေ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို ယနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၃ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် လွှတ်တော်အခွင့်အရေး.